घर अमेरिकी फुटबल स्टोरीहरू अर्जेन्टिना फुटबल खेलाडीहरू पलियो डाइब्ला बालुवा स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
एलबी पूर्ण फुटबल प्रतिभा को सर्वश्रेष्ठ उपनाम द्वारा ज्ञात प्रस्तुत गर्दछ; "ला जोया" AKA रत्न। हाम्रो पाउलो डिबाला बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू तपाईंको बाल्यकालको समयदेखि आजको दिनसम्म तपाईंलाई उल्लेखनीय घटनाहरूको पूर्ण खाता लिएर आउँदछ।
अर्जेन्टिना र जुभ फुटबल लीजेन्डको विश्लेषणमा प्रख्यात भन्दा पहिले उनको जीवन कहानी, पारिवारिक जीवन र धेरै बन्द र ओएन-पिच अर्जेन्टिना सुनौलो बच्चाको बारेमा थोरै ज्ञात तथ्यहरू समावेश छन्। हामी सुरु गरौं।
पाउलो डिबाला बचपन कहानी -अर्ली जीवन र परिवार पृष्ठभूमि:
पोलो डाइबला जन्म भएको थियो पाउलो ब्रुनो एक्स्पिलेबल दुबला 15th नोभेम्बर 1993 मा लागुना लर्ग, कोर्डोबा, अर्जेंटीना मा श्री एडल्फो दुबला (पिता) र श्रीमती एलिसिया डे डब्बाला (आमा) द्वारा।
एक मध्यमवर्गीय परिवारमा Dybala को जन्म एक भविष्यवाणी मार्फत आयो। हो, उहाँ एक रहस्यमय बच्चा हुनुहुन्थ्यो जुन आफ्नो जन्म हुनुभन्दा अघि नै फुटबलर हुने भविष्यवाणी गरिएको थियो। यो भविष्यवाणी उनको बुबा, एडोल्फो Dybala द्वारा गरिएको थियो। उनका तीन छोराको जन्म हुनुभन्दा अगाडि उनले भनेका थिए…
"मेरो एक छोरा एक दिन एक मिसनको साथ जन्म हुनेछ। फुटबल खेल्न "।
पाउलो डिबाला यो भविष्यवाणी पूरा गर्न को लागी जन्म भएको थियो। ऊ घरको अन्तिम बच्चा र बच्चाको रूपमा जन्मेको थियो। Dybala गन्तव्य आकार थियो जब उनले एक धेरै कोमल उमेर मा फुटबल खेल्ने निर्णय गरे।
आफ्नो भाग्य अवलोकन गर्दा, एडोल्फो कहिल्यै पनी प्रतिबद्ध भएन। उसले अन्तिम पैसा उसको गाडीको लागि ग्यास किन्नको लागि प्रयोग गर्थ्यो र उसलाई दैनिक आधारमा तालिम मैदानमा पुर्‍याउन।
पलो डाइब्ला र बुबा, एडोल्फ डब्बा।
उनले पाउलोमा यति धेरै लगानी गरेका थिए कि उनी भविष्यवाणी पूरा भएको चाहन्थेन, बरु उनले सफल भएको आफ्नो संकल्प देखेकाले।
पालो डाइब्ला को अनुसार, त्यहाँ कुनै दिन थिएन जब मेरो बुवा मसँग प्रशिक्षणमा आएनन्।
एक सानो बच्चाको रूपमा, म मेरो खेलको समयको बारेमा हेरचाह गर्थें। म घर जान्छु, बाथरूममा आफूलाई लक गर्छु र म पर्याप्त खेल्ने समय दिइरहेको छैन वा पर्याप्त दक्षता प्रदर्शन नगरेको बेला रोएको छु। ”
Dybala एक कुरा आफ्नो बुबा owedणी। आफ्नो भविष्यवाणी पूरा र उहाँलाई आनन्द र आफ्नो श्रम को फल देखाउन।
दुर्भाग्यवश, पछि कहिले त्यस्तो भएन जब उनका पिताको निधन एक पटकमा उहाँलाई सबैभन्दा बढी चाहिएको थियो। ऊ अझै पनी आफ्नो बुबालाई शोक गर्दछ।
ठूला टिमहरू नष्ट गर्न र विश्वको सबैभन्दा ठूलो फुटबलर बन्नको लागि आफ्नो बुबाको मृत्युको पीडा अब सबैभन्दा ठूलो सहयोगी हो।
पाउलो डिबालाका बुबा, अल्डोफोले सपना देखे कि उनले आफ्नै आँखाले पूरा भएको देख्दैनन्। यो सेप्टेम्बर २०० was मा थियो कि क्यान्सरले उनलाई समय भन्दा पहिले नै लग्यो। त्यसबेला पाउलो १ was वर्षको थियो।
पाउलो डिबाला पारिवारिक जीवन:
पाउलो डिबालाका बुबा स्वर्गीय श्री एडोल्फो डायबालाको जरा पोल्याण्डको क्रास्नो गाउँबाट पत्ता लागेको छ।
आज, अर्जेन्टिना आफ्नो परिवारको घरको रूपमा देखिन्छ। उनको परिवारको जरा पोल्याण्डबाट पत्ता लगाइएको छ तिनीहरूका हजुरबुबा, बोरोसा डाइबालालाई, जो कि पोल्याण्डको किल्सको नजिक जन्मेका थिए।
उनी दोस्रो विश्वयुद्धको बेला अर्जेन्टिनामा जन्मेका देश पोल्याण्डबाट भागे। यो नाजीहरूले आफ्नो Krasniow गाउँ कब्जा गर्दा यो भयो।
पाउलोको परिवारको पनि इटालियन मूल हो उनकी आमाको हजुरआमाबाट, दा मेस्सा। उनी नेपल्सको प्रान्तको हो।
पाउलोले आधिकारिक रूपमा १ August अगस्ट २०१२ मा उनको इटालियन नागरिकता प्राप्त गर्यो। उनी पोलिश, इटालियन, अर्जेन्टिना राष्ट्रिय फुटबल टीमको लागि खेल्न योग्य छ। पाउलो डिबाला र उनकी आमा श्रीमती एलिसिया डे डायबाला धेरै नजिक छ।
एक शब्दले यसलाई राख्दछ, त्यहाँ कहिल्यै नभएका छैन, न त त्यहाँ हुनेछैन, आमा र एक छोराबीचको प्रेमको रूपमा धेरै धेरै विशेष। यो दुई बीचको मामला हो।
सर्जियो Aguero बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
पाउलो डिबाला र आमा, एलिसिया डे।
गुस्ताभो डिबाला पाउलो डाइबालाका जेठो दाइ हुन्। उसले एक पटक फुटबलको प्रयास गर्‍यो तर बनाएन।
पाउलो डिबालाको जेठो भाई, गुस्ताभो डिबाला।
यो उसको बोलावट होइन भनेर थाहा पाएपछि उनले खेलको सुरुमै छोडिदिए। गुस्ताभोले हाल ब्युनोस आयर्स, अर्जेन्टिनामा आफ्नो व्यवसाय प्रबन्ध गर्दछ।
मारियानो डिबाला (तल) पाउलो डिबालाको तत्कालको ठूलो भाई हो। ऊ कहिल्यै फुटबलमा चासो राख्दैनथ्यो र यसरी अनसेटबाट टाढा रह्यो।
उसले व्यायामशालामा माया पायो। मारियानो हाल ला प्लाटा, अर्जेन्टिनामा जिम्नास्टिकको तल्लो वर्गमा खेल्छ।
Dybala र तत्काल दाजु, मारियानो Dybala।
यो पालो थियो, छोटोले यसलाई तोड्यो।
पाउलो डिबाला सम्बन्ध जीवन:
यो बायो लेख्दा एन्टोनेला काभलिरी पाउलो डिबालाकी राम्री प्रेमिका हुन्।
पाउलो डिबाला प्रेम कहानी।
उनको मान्छे सबै चोर्न सक्छ चमक क्षेत्र मा तर यो उनको ध्यान को सबै ध्यान हुन्छ। एन्टोनेलाको लागि 'एन्टो' छोटो गरी जाने मिस काभलिरी बली प्रसिद्धि प्रसिद्ध फुटबल स्टार संग उनको रिश्ते को लागी, तब देखि सोशल मीडिया मा एक विशाल पछि लाग्न।
दुबलासँग उनको सम्बन्धको लागि सोशल मिडिया स्टारम बढ्नु अघि उनले एक समयको रेस्टुरेन्टको रूपमा काम गरेका थिए।
अर्जेन्टिनी सुन्दरता मात्र इन्स्टाग्राममा २ 280० भन्दा धेरै अनुयायीहरू छन्। Lovebirds वर्ष को लागी डेटि। गरीएको छ। तिनीहरू बो बनेyfriend र प्रेमिका 2015 अन्तमा।
एन्टोनेला काभलिरीसँग हालमा डिग्री छ व्यापार ब्यूनस आयर्स मा यूनिवर्सिडाड डी पलार्मो देखि प्रशासन। त्यो राम्रो जीनहरूसँग आशिष् दिइन्छ जसले पनि आजको मोडेल बनाउँछ।
धेरैले देखेको रूपमा उनीहरूको सम्बन्ध एक गम्भीर हो भनिन्छ। एन्टोनेला धेरै बर्ष उनको मान्छे को धेरै सहयोगी साबित भएको छ।
उनीले डिब्लाको खेल सायद कहिल्यै बिर्सिनिन र उनी प्राय: पोष्ट गर्दै र धेरै साझेदारी गर्छिन् फोटो कहिलेकाहीँ उहाँमा साहसी हुनुहुन्थ्यो। हालै नै उनको ग्लेडिएटर लक्ष्य उत्सव कदम बनाउन को एक दृश्य हो।
Dybala मास्क उत्सवको अनटल्ड कथाहरू।
उनले आफ्नो ट्रेडमार्क उत्सव इशारामा महारत हासिल गर्छिन्, Dybala का मास्क तुरुन्तै उनीहरूको सम्बन्ध सुरु भयो। के एन्टोनेला काभलिरी डिबालाको लागि मात्र हुन सक्छ? केवल समय बताउनेछ।
पाउलो डिबाला जीवनी-रिहानाको साथ सेलब्रेटिंग:
Dybala एक ठूलो स्टार मा आफ्नो प्रदर्शनको जोडी को लागी आफ्नै सही एक स्टार हो। उनले एकपटक रिहानाको सुपरनोवाको चमकमा बास्क गरेका छन्, र उनी आफ्नो उपस्थितिमा उपस्थित हुन पाउँदा खुसी देखिन्छन्।
पाउलो डिबालाले रिहानालाई केही जन्मदिनको प्रेम देखाई जहाँ उनी उनीबाट उत्कट प्रतिक्रिया पाए। अर्जेन्टिनाका स्ट्राइकरले उनको २ th औं जन्मदिनको लागि सांगीतिक देवी रिहानासँग एक चित्र पोस्ट गरे, र उनी त्यहाँ हुँदा बढी खुशी भएनन्।
रिभानाको सुन्दर र टाईला लागी डिबालाको साथ उनले आफैंले हस्ताक्षर गरेको शर्ट समातेको थियो, र अर्जेन्टिनीको सुनौलो बच्चा ऊ आफ्नै व्यक्तिगत स्वर्गमा रहेको देखिन्थ्यो। बस उनको अनुहार हेर्नुहोस्। ऊ क्लाउडमा तैरिरहेको छ र केही माया महसुस गरिरहेको हुनुपर्दछ।
रिहानाको भाइ, रोर्रे एक जूभेरस समर्थक हुन जान्छ, तर Ri-Ri को allegiances मा कुनै वास्तविक शब्द छैन। कुनै पनि तरिका, यो डब्बा जस्तै धेरै देखिन्छ जस्तो लाग्छ।
पाउलो डिबाला जीवनी तथ्य - ग्लैडिएटर फिल्म फ्रीक:
पाउलो डिबाला ग्लैडिएटर फिल्मको प्रेमी हो, किनकि उसले यो देख्यो कि उसले यसलाई हेरीरहेको छ (30० भन्दा बढी पटक)।
दुई कारणले उनलाई यो चलचित्र किन मनपर्दछ भनेर वर्णन गर्दछ।
सबैभन्दा पहिले म्याक्सिमसका शब्दहरू हुन् जब उनले सबैलाई आफ्नो वास्तविक चिनारी अनावरण गरे। यी शब्दहरूले उनको जीवनको एक फरक अर्थ दिन्छ।
.. यो निम्नानुसार जान्छ; "मेरो नाम मक्सिमस डेसिमस मेरिडियस, उत्तर सेनाको कमान्डर, फेलिक्स सेनाको जनरल, सही सम्राटको वफादार सेवक, मार्कस अरिलियस हो।
बाबु एक हत्यारा छोरा, एक पति एक हत्याको पत्नी। यस जीवनमा वा त्यसपछिको जीवनमा म बदला लिनेछु। ”
पाउलो डिबालाले यसको अर्थलाई आकार दिईएको छ…।"मेरो नाम पाउलो ब्रुनो एक्किक्वेल डायबाला हो, ला जुया (गोल्डन चाइल्ड) विश्व फुटबल, .. एफसी बार्सिलोना को स्लेयर।
केटाले जसको बुबाले एक पटक एक ठूलो फुटबलर हुन अगमवाणी गरे। म अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो आक्रमण गर्ने मिडफिल्डर हुनको लागि निश्चित छ। ”
दोस्रोयस फिल्मले उनलाई टिमवर्कको महत्त्व बुझ्न मदत दियो जुन उनी आजको खेलको मैदानमा सर्दछन्।
जनरल मेक्सिमस अनुसार ग्लेडिएटर चलचित्रमा, "जुनसुकै गेट्सबाट बाहिर आउँदछ, हामी सँगै काम गर्छौं भने हामी अस्तित्वको एक राम्रो मौका पायौं।"
पाउलो डिबालाले आफूलाई र आफ्ना टीमका साथीहरूलाई बताउँदछन् जब उनी एफसी बार्सिलोना जस्ता धेरै महत्त्वपूर्ण खेलहरू खेल्छन्। ग्लिडेटर चलचित्र द्वारा उदाहरणको रूपमा टीम वर्कले उनी किन ओल्ड लेडीमा सामेल भए भन्ने कारण वर्णन गर्दछ।
पाउलो डिबाला जीवनी - मास्क उत्सवको कारण:
पाउलो डाइबालाले आफुलाई औंठी र यसको अनुक्रमणिकाको साथ मास्क बनाएर मौलिकता पूर्ण इशारामा सचित्र थियो।
सामाजिक सञ्जालमा, दुबलाले एक पटक आफ्ना अनुयायीहरूलाई अर्थ पत्ता लगाउन को लागी उनको जर्सी कुञ्जीमा उपहारको रूपमा आमन्त्रित गरे।
अन्ततः उनले यस आन्दोलनको घुम्टो हटाए आफैले डायबला मास्कलाई बप्तिस्मा गरे। उनको फेसबुक खातामा, पाउलो डिबालाले एउटा भिडियो पोस्ट गर्‍यो जुन उनले आफ्नो उत्सवको अर्थ वर्णन गर्दछ। भिडियोमा, उनले भने कि यसले केवल एक ग्लैडेटरको मास्कलाई जनाउँछ।
Dybala अनुसार, ..."Dybalamask साँच्चै सरल छ: यो एक ग्लैडेटरको मास्क हो! जब हामी स struggle्घर्ष गर्दछौं, कहिलेकाँही हामीले हाम्रो मुस्कान र दया गुमाउनुपर्दा बलियो हुनको लागि हामीले योद्धाको मास्क लगाउनुपर्दछ! ”
पाउलो डिबाला आइडल:
Dybala सँधै उनी जुआन रोमन रिकेलमेको साथ खेलेको चाहेको छ। ऊ अर्जेन्टिना आक्रमण गर्ने मिडफिल्डरको संयुक्त पासिंग, दर्शन, प्राविधिक सीप र गोल स्कोरिंग क्षमता हेरेर र सिक्दै हुर्क्यो।
“राइक्ल्मे एउटा गरीब परिवारमा ११ बच्चाको जेठोको रूपमा जन्म भएको थियो। उनको बहादुरीले उनलाई महानतामा पुर्‍यायो।
ऊ जहिले पनि मेरो फुटबल विश्व फुटबल मा सबै भन्दा राम्रो आक्रमण गर्ने मिडफिल्डर छन। उनले अर्जेन्टिना फुटबलर अफ द इयर अवार्ड won पटक जितेका थिए, यस्तै रमाईज डिएगो माराडोनाले गरे। उनले २००4मा अर्जेन्टिना टोलीको ओलम्पिक स्वर्ण जितेका थिए। ”
पाउलो Dybala जीवनी तथ्य - संक्षिप्त मा क्यारियर:
उहाँले 2010 वर्षको उमेरमा पेशेवर जाने अघि स्कूल र कलेजहरूमा सानो लीगहरूमा खेल्नुभयो जब उनले अर्जेन्टिनाली क्लब प्रिमरा बी नासिकको लागि खेल सुरु गरे।
उनले स्ट्राइकरको रूपमा क्लबका लागि खेले र पहिलो सत्रमा क्लबका लागि १ goals गोल गरे। उनको प्रदर्शनले अर्जेन्टिनाका सबै प्रशिक्षकहरू र युरोपको क्लबबाट पनि चासो लिन थाल्यो। २०१२ मा उनी इटालियन क्लब, पालेर्मोले सम्पर्क गरे।
Dybala आफ्नो कौशल वृद्धि गर्न को लागी एक मौका देख्यो र उनी क्लब मा सामेल भए। २०१२ मा उनले क्लबको साथ शुरू गरेका थिए क्लबको लागि आफ्नो चौथो खेलमा ब्रेसिंग स्कोर।
उनको रणनीतिक खेल र कौशल सेट लीगको शीर्ष आधा मा रहनको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण थियो। यतिखेर, अरू युरोपेली क्लबहरूले उनलाई भ्यागुताहरू जस्तै हेरिरहेका थिए जब उनी आफ्नो उमेरका लागि धेरै राम्रो खेलाडी साबित भइरहेका थिए।
उनीहरूलाई नयाँ मेसीको रूपमा मानिएको थियो किनभने त्यो सानो जादूगरको रूपमा एउटै देश हो। उहाँ3वर्ष र 2015 मा क्लबको साथ रुनुभयो र उनीहरूले धेरै स्थानान्तरण अन्वेषण गरेर इटालीका दिग्गज ज्युनेससको लागि साइन अप गर्नुभयो जसले संसारमा हरेक प्रमुख क्लबमा जडान गरे।
उनको निर्णयले उहाँ इटालीमै बस्न चाहानुहुन्छ भन्ने कुराबाट प्रभावित भएको थियो र जुभेन्टस इटालीको सब भन्दा राम्रो क्लब थियो जसले उनको दिमाग अत्यन्त स्पष्ट बनायो।
उनी रियल मैड्रिडसँग पनि जोडेका थिए जो क्लब पलेर्मोलाई खेलाडीको सेवाका लागि करिब $ करोड pay० लाख तिर्ने तयारीमा थिए तर डायबालाले इटालीमै बस्न मन लगाए र उनले त्यसो गरे।
पोग्बाको प्रस्थान पछि उनलाई १० नम्बर शर्ट दिइयो जुन पहिले पोगबाले जितेका थिए तर उनले २१ नम्बरको जर्सी आफैंमा राख्ने निर्णय गरे। बाँकी उनीहरूको बायो को भन्छ इतिहास हो।
पाउलो डिबाला टाटु अर्थ:
एउटा ट्याटू पाउने निर्णय, रेखाचित्र जुन तपाईंको मर्ने दिन सम्म तपाईंको शरीरको एक हिस्सा हुनेछ, पाउलो डिबालालाई ध्यानपूर्वक सिकाएको एउटा ठूलो हो।
उसको अरबी ट्याटू उसको पसलको देब्रे छेउमा रहेको छ, उसको मुटुको छेउमा सायद सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। यसले अरबी अक्षरहरूमा उसको आमाको नाम एलिसलाई लेख्छ। ट्याटु २०१ December को २th डिसेम्बरमा गरियो।
अर्जेन्टिनियाको एक पत्रिकालाई एउटा अन्तर्वार्तामा डिबालालाई उनको बाँया हातमा पछाडि रहेको आर्मब्यान्ड ट्याटुको अर्थ सोधियो। उनको प्रतिक्रिया थियो ..
“मैले यो गरें किनकि मलाई यो मनपर्‍यो। एक टीममेटको उही ट्याटु थियो र मलाई यसको सौन्दर्य मनपर्‍यो। यो पुरानो रोमीहरूले युद्धको लागि प्रयोग गरेका ब्रेसलेटहरूसँग मिल्दोजुल्दो छ, तर यसको अर्थ जे होस्, मैले यो सौंदर्यको लागि गरेँ। “
उनले आफ्नो बायाँ पैदल भित्र भित्रको मुकुटसँग एक फुटबलको ट्याट्ट गरेको छ, कोर्डोबा सिटीमा बनेको टाउको कलाकारले नोएल नाम गरेको कलाकार द्वारा।
पाउलो डिबाला बायो - ऊ मोजो डाउनसँग किन खेल्छ:
पाउलो डिबाला अल्छी, अप्ठ्यारो शैलीको प्रतीक हो कि कम मोजा भएका धेरै फुटबलरहरू स्वामित्व राख्दछन्। एफसी बार्सिलोनाको स्लायरको रूपमा ट्याग गरिएको बाहेक, उहाँ आफ्नो पुस्ताको मोजा तल खेलाडीहरूको लागि नवीनतम पोस्टर केटा हुनुहुन्छ।
अब प्रश्न छ; पाउलो डिबालाले साना साना प्याड किन लगाउँछ? सब भन्दा लोकप्रिय उत्तर महाशक्तिहरू प्राप्त गर्नु हो।
विश्वका सर्वश्रेष्ठ फुटबलरहरू उनीहरूको जुत्ता तल खेल्छन्। उदाहरणहरुमा रुई कोस्टा, फ्रान्सेस्को तोट्टी र थोमस मुलर।
एक तरफ उहाँलाई महाशक्तिहरू दिँदै, यसले उसलाई उमेर नहुने क्षमता पनि दिएको छ। पाउलो डिबाला अझै पनी १ 17 बर्षको बच्चा जस्तो देखिन्छ। ऊ अझै त्यहि उमेर देख्नेछ यदि उसले ती मोजाहरू कम राखिरह्यो भने।
पाउलो Dybala जीवनी तथ्य - LifeBogger रैंकिंग:
हामीले अर्जेन्टिना हिटम्यानका लागि हाम्रो स्तर निर्धारण गरेका छौं। तल फेला पार्नुहोस्;
परिमार्जित मिति: मे १,, २०१ 28